Kaonty mpivaro-tena ambony sy fanodinana karatra mihetsika any ivelany
Kaonty mpivarotra any ivelany sy fanodinana carte de crédit ambony mety
A kaonty mpivarotra mampidi-doza matetika a kaonty mpivarotra any ivelany. Izany hoe, mampiasa kaonty banky iraisampirenena ny fizarana karatra fahazoana karama ary hahazoany vola. Amin'izany fomba izany dia afaka miteraka fidiram-bola any amin'ny kaontinao any ivelany ianao. Ankoatr'izay, ireo mpamatsy kaonty mpivarotra karatra dia afaka miantso saika olona rehetra ary saika misy fikambanana iray ho orinasa ambony "risika". Noho izany, ny orinasam-panodinana dia mitaky anao hametraka kaonty mpivarotra karatra fatiantoka ambony.
Ireo orinasa fanodinana carte amin'ny carte de crédit dia manao izany amin'ny fangatahana fampiharana noho ny antony maro. Ohatra, azon'izy ireo atao ny manasokajy orinasa iray izay misy tahan'ny vola miverina amin'ny vidiny mety hitera-doza. Ankoatr'izay, hitanay izy ireo fa hamadika ny rindranasa satria ny mpangataka na karazana orinasam-barotra dia tsy mahafeno fepetra momba ny fanoratana an-tsoratra. Raha izany no zava-misy aminao, mety hahatonga ny orinasa manamboatra carte de crédit ambony be ny valiny.
Fanodinana karatra amin'ny banky sy banky any ivelany
Rehefa miasa miaraka amin'ny mpamatsy fanodinana carte amin'ny carte de crédit manana tombam-bidy manokana amin'ny kaonty mpivarotra ambony, dia azo inoana fa hanekena ny fangatahana ataonao. Matetika dia tafiditra amin'izany io offshore bank ary ny kaontin'ny mpivarotra.
Vola amin'ny kaontin'ny Banky Offshore
Matetika, ireo mpivarotra ambony tsy dia miloa ambony dia andoavambola lafo kokoa. Na izany aza dia hitanay fa mitahiry ny 98% mpivarotra amin'ny fanodinana sarany ny zavatra iainany amin'izao fotoana izao. Toy izany no mitranga, na manana filana ambany, antonony na avo lenta. Mitandrema ianao satria misy mpamatsy maro izay hanekena ny mpangataka maimaim-poana miaraka amin'ny fifanarahana miandalana ary tsy manafintohina. Noho izany, jereo foana ny fifanarahanao ary jereo raha misy ny fenitra hampihenana ny tahan'ny fifanakalozana. Ohatra, ny tahirim-bidy lehibe kokoa, fifanarahana fitehirizana sy karazana fanamaivanana hafa mety hanampiana ny mpangataka iray hahazo ny vidiny tsara indrindra.
Mila kaonty Banky Offshore ve aho?
Ny mpamatsy vola dia afaka manisy marika ny orinasa iray mety hampidi-doza noho ny indostrian'ny orinasa. Ny tompony dia afaka manana trosa ratsy. Ankoatr'izay, ny orinasam-barotra vahiny iray miaraka amin'ny fifanakalozana any Etazonia dia mety hanana ny orinasa. Raha tsy izany, ny vokatra na serivisy dia mety ho tsy ara-dalàna araka ny lalàna sasany eo an-toerana na fanjakana na federaly. Na ny fikaonan-doha amin'ny varotra na famarotana aza dia mety hiteraka fihemorana. Noho izany, amin'ireo orinasa marobe, ny kaonty mpivarotra any ivelany dia io no hany safidy hanaingoana carte de crédit amin'ny Internet. Mba hahazoana iray, ny ankamaroan'ny mpivarotra dia mitaky anao hanana kaonty amin'ny banky eo ampitan'ny tanàna. Midika izany fa ny fametrahana orinasa any ivelany sy kaonty any ivelany.
Ny orinasa mila mila kaontin'ny mpivarotra varotra
Ny ankamaroan'ny olona dia mino fa ny kaonty mpivarotra atahorana avo dia natao ho an'ny casino an-tserasera na farmasia fotsiny. Saingy, miaraka amin'ny torolàlana fampindramam-bola sy fitakiana kaonty ara-bola ankehitriny, marika be dia be azo itokisana sy orinasa an-tserasera dia "atahorana be". Ireto misy karazan'orinasa izay mila kaonty mpivarotra ambony risika.
1-800 tranonkala fifanakalozan-dresaka
Amazon, Yahoo ary Google Store
Mpisolovava amin'ny bankirompitra
Casino, filokana na lalao
Jereo ny saram-pandraharahana
Sigara na sigara elektronika na sigara
Hazo, vola hividianana vola na fanangonam-bokatra
Kipona na valiny momba ny lohahevitra
Fanamboarana trosa sy fanamboarana trosa & torohevitra momba ny trosa
Famerenana ny fahasalamana sy ny fandaharam-pitsaboana
Fanafody fampiasa zava-mahadomelina
E-boky (fitaovana vita an-tsoratra)
Kaominina tapakilam-pandraharahana (lisitr'ireo tsy nahazoan'ny lisansa sy tsy voarakitra)
Fandefasana tolotra (tsy miorina any Etazonia)
Fandefasam-peo federaly (FFL)
Sampan-draharaham-bola, mpanolotsaina ara-bola na tolotra fanovana fanofana
Fanaraha-maso ara-bola indirect (oh. Ahoana ny fomba hamonjena ny vola amin'ny fihenan'ny volavolan-dalàna ataonao?)
Drafitra ara-bola, paikady na toro-hevitra
"Raiso boky haingana, programa, sns
Lisitry ny salanisa avo lenta
Ny "Ahoana-To" dia manonona tranonkala (oh: "Mianara mandanjalanja amin'ny Internet")
Horoscope, astrolojia na asa sasa-miasa (ie ireo mpilalao sarimihetsika)
"Hype" vokatra na serivisy
Hypnotists na hypnosis tena izy
Ny mpivarotra iraisam-pirenena (tsy miorina any Etazonia)
Fandefasana iraisam-pirenena, entana na entana / fanondranana
Boky paikady momba ny fampiasam-bola & Boky fampiasam-bola
Tolotra fanamafisana ny mpisolovava
Gazety sy famandrihana mozika
Fikambanan'ny mpikambana (mihoatra ny 12 volana)
Ny mpivarotra tao amin'ny rakitra ara-barotra voavidy (lisitry ny TMF)
Fivarotana marobe (MLM)
Mozika, sarimihetsika, rindrambaiko maimaim-poana na uploads (ie mozika kopia, horonan-tsary na rindrambaiko (na birao Microsoft))
Tsy olom-pirenena amerikana
Karatra famotsoran-keloka mialoha
Tolotra an-tariby mivantana na ivelany
Replica valizy, watches, poketra, solomaso etc ...? (Mandondòna-offs)
Fiarovan-tena, dipoavatra, tavoahangy, sns.
Tranonkala fifaneraserana sosialy? Facebook, Twitter, MySpace sns ...?
Fanombanana amin'ny fanatanjahan-tena na fifaninanana ara-tsakafo
Fanodinana fahatelo, mpanamboatra mpivarotra (izany hoe mpanodina fandoavam-bola, mpivarotra vakansy vakina)
Ny fotoana-mizara na ny fotoana-dia mizara dokam-barotra
Serivisy fitsangatsanganana & Travel Travel
Fonenana vakansy (raha tsy ny mpivarotra no tompony)
Vitaminina sy fivarotana fanampiny? sakafo fanafody, fanafody fitsaboana, fanampiana ara-pahasalamana, pharmacy
Fiantohana fiantohana manerantany
Fitaovam-piadiana misy karazana: basy, antsy, basy mihidy na basy. Ao anatin'izany ny faritra rehetra amin'ny fitaovam-piadiana (izany.
Fanarahana ny hetra
Mazava ho azy, raha manana kaonty banky sy kaonty any ivelany ianao dia mila mitazona hetra fanajana. Ohatra, ny olona any Etazonia, UK, Canada, Aostralia sy ny firenena maro hafa mandoa hetra eran-tany. Aza hadino, mihazona torohevitra tsara momba ny hetra arahin'ny matihanina momba ny hetra nahazo alalana.
Ahoana ny fomba hametrahana ny kaonty mpivarotra risika ambony
Rehefa avy namaky izany ianao, mety ve aminao ny kaonty mpivarotra any ivelany izay mahavita be? Raha izany no izy, azafady ampiasao ny laharana an-tariby na fakan-kevitra momba ity pejy ity. Rehefa manao izany dia afaka miresaka amin'ny matihanina afaka manome anao fampahalalana bebe kokoa.
<Ho an'ny toko 8
Ho an'ny toko 10>